चट्याङले टेलिकम सेवा अवरुद्ध, मर्मत गर्न प्राविधिक टोली जाँदै - नेपालबहस
२४ फागुन सिन्धुली । सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–५ भीमसेनडाँडामा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरलाई चट्याङले क्षति पु¥याउँदा सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रञ्जु सिग्देललले शनिबार विहान परेको चट्याङले सो डाँडामा रहेको टावरको उपकरणलाई क्षति पु¥याएको जानकारी दिए । कुन उपकरणमा कति क्षति पुगेको हो भन्ने विवरण प्राप्त नभएको उनले बताए ।
चट्याङका कारण टावर नजिकै रहेका पाँच घरका विद्युत्को मिटरबक्समा क्षति पुगेको जनाइएको छ । नेपाल टेलिकमका लेखा अधिकृत बसुधरा खड्काले टावरमा चट्याङ पर्दा पूरै क्षति भएको, मर्मत गर्न प्राविधिक टोली आइतबार आउने र छिटोभन्दा चाँडो सेवा सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए ।
कोरोना बढेसँगै विदेशी पर्यटक मनाङमा अलपत्र भर्खरै
नयाँ सरकार कोभिडविरुद्ध सक्रिय हाेला त ? ६ मिनेट पहिले
राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित २३ मिनेट पहिले
पूर्वराजाले दिए शुभचिन्तक तथा आफ्नाे उपचारमा खटिने डाक्टर र नर्सलाई धन्यवाद ३५ मिनेट पहिले
प्रतिष्ठित व्यवसायी घिमिरेले चीनबाट अक्सिजन सिलिण्डर लगायतका सामग्री ल्याउँदै ४६ मिनेट पहिले
सूचना प्रविधिले बजारिकरणको भाषालाई विशिष्टिकरण गरेको छ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्श ७ दिन पहिले
बूढानीलकण्ठमा सभापति देउवाको पत्रकार सम्मेलन २ हप्ता पहिले
स्याङ्जाको आकाशमा उल्का जस्तै चम्किलो वस्तु, आकाशीय पिण्डमा आगोको मुस्लो ! १ वर्ष पहिले
ज्योति विकास बैंक र जेएमई रेमिटबीच सम्झौता १ वर्ष पहिले
अपराध स्वीकारे माधवजीलाई पनि एमालेमा स्वागतः ओली १ महिना पहिले
चमुवाखोलामा ‘पक्की कल्भर्ट’ २ महिना पहिले